IBhodi yezoKhenketho eJordani: amanani eendwendwe zase-UK anyuka nge-15.8%
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Icandelo lokungenisa izihambi » IBhodi yezoKhenketho eJordani: amanani eendwendwe zase-UK anyuka nge-15.8%
Airlines • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • Utyalo mali • IJordani Breaking News • iindaba • abantu • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Ngamana 4, 2017
IJordani ibone ukukhula kwakhona kwinani labakhenkethi base-UK kwikota yokuqala ye-2017, Januwari-Matshi, inyuka nge-15.8 yepesenti, xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kwi-2016. Iipesenti ezisi-7 ngo-2016.
Isibheno esandayo saseJordani esandayo kubakhenkethi base-UK sikhuthaze umqhubi omtsha wabakhenkethi, iFlash Pack, egxile kukhenketho lweqela labazimeleyo abaneminyaka engama-30 ukuya kwengama-40 abakhenkethi, ukungena nokwamkela iindwendwe kwi-Hashemite Kingdom. I-Flash Pack ithengise zonke iindawo kumava abo okuqala eJordani kwisithuba esingaphantsi kweeyure ezintathu neendwendwe ezihamba kule Okthobha zisiya kwezinye zelizwe. Imfuno kunye nokuthandwa kukhenketho olutsha lweFlash Pack kukhokelele ekungenisweni kohambo olongezelelweyo ezisithoba ngo-2017 nango-2018.
Ukuqaliswa kwekota yokuqala
Ukuphehlelelwa kweJordan Trail ekuqaleni konyaka ka-2017, okudibanisa ubude belizwe ukusuka e-Um Qais emantla ukuya e-Aqaba emazantsi, kongeze omnye umba omnandi kwisibheno sezokhenketho selizwe. Umzila uvumela iindwendwe ukuba zinyuke iJordani iphela, zime kwiindawo ezinophawu olubandakanya iPetra, uLwandle oluFileyo kunye neWadi Rum, kunye neendawo ezingabonakaliyo endleleni.
Ikota yokuqala yonyaka ka-2017 ikwabone iJordani yamkela utyikityo lwayo lokuqala olunemingxuma engama-18 kwingca yegalufa eAqaba, kunxweme loLwandle Olubomvu. Ifunyenwe ziingcali zegalufa kunye nabathandi engqondweni, zimbalwa iindawo zokufikela eMbindi Mpuma ezibonelela ngezixhobo ezidumileyo kunye neendawo ezizolileyo ezinikezelwa nguAyla. Eyilwe yi-golfer eyaziwayo uGreg Norman, ikhosi ye-18-hole yobuntshatsheli ibekwe embindini wophuhliso lwendawo entsha yamanzi yase-Aqaba. Ukunikezela ngoluhlu lwemingxunya ukujongana nabo bonke ubuchule
Uluhlu lweehotele ezintsha kwaye kwaye zicwangciselwe ukwazisa ngo-2017 kubandakanya, i-Century Hotel Dead Sea Jordan, W Amman Hotel, Fairmont Hotel, The St Regis Amman, Hyatt Regency, Al Manara kunye neJumeirah eSaraya Aqaba. Iihotele kunye neehotele zaseHilton zisungule ipropathi yabo yokuqala, iHilton Dead Sea, eJordani ngo-Matshi 2017 kunxweme olusempuma loLwandle Olufileyo.